चालु आवभित्रै ती कम्पनीले आईपीओ जारी गरी तोकिएको चुक्तापुँजी पु¥याउने तयारी गरिरहेको बुझिन्छ । काठमाडौं । दोस्रो पुँजीबजारमा सुधारका कार्य भईरहेसँगै प्राथमिक बजारमा पनि आकर्षक कम्पनीका शेयरहरू धमाधम आईरहेका छन् । केही समयअघिमात्रै राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा चर्चित माथिल्लो तामाकोशीको शेयर निष्काशन भएको थियो । सो कम्पनीको...
काठमाडौं । नाडेप लघुवित्त वित्तीय संस्थाको आईपीओलाई नेपाल धितोपत्र बोर्डले स्वीकृत गरेको छ । बोर्डले आज सो आईपीओलाई स्वीकृत गरेको हो । कम्पनीले सर्वसाधारणका लागि ४ लाख ८० हजार कित्ता आईपीओ प्रदान गर्न लागेको हो । सो कम्पनीले चालु आवको तेस्रो त्रैमासमा ४ करोड ४६ लाख खुद नाफा कमाई प्रतिशेयर ५३ रुपैयाँ बढी आम्दानी गरेको थियो । कम्पनीको...
काठमाडौं । नेपाल सेवा लघुवित्तको आईपीओमा ९१ प्रतिशत बढी आवेदकलाई रित्तो हात फर्कनुपर्ने भएको छ । कम्पनीको बिक्री प्रबन्धक एनएमबी क्यापिटलका अनुसार सो कम्पनीको आईपीओमा २ लाख ८ हजार १३१ जनाको आवेदन परेको छ । सो आधारमा हेर्दा कम्पनीका आईपीओ आवेदकमध्ये १ लाख ९१ हजार ४ सय ३१ जनाले शेयर प्राप्त गर्ने छैनन् । कम्पनीले जारी गरेको कुल १ लाख ८०...
काठमाडौं । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले आफ्नो नेतृत्वको अर्थतन्त्रले राम्रोमात्र देख्ने बताएका छन् । उनले ट्विटर मार्फत् लेखेका छन्–‘पुँजीबजारको शुभदिन शुरु भइसेको थियो, अब त कर छुट विधेयक समेत पारित भएको छ, हामीसँग अत्यन्त धेरै सम्भावना छ । DOW ले २५००० लाई छुन लाग्यो, बेरोजगारी ४.१ प्रतिशतमा झ¥र्यो । केवल राम्रो हुँदैछ...
काठमाडौं । बुधबार बजार परिसूचक नेप्से अघिल्लो दिनको तुलनामा २०.६३ अंकले घटेर १४१६.६१ अंकमा आइपुगेको छ । आइतबार १४०० भन्दा तल आइपुगेको बजार सोमबार एकैपटक ४४ अंकले बढेर १४३४ अंकमा पुगेकोमा मंगलबार स्थिरजस्तै भएको थियो । बुधबार भने सोमबारको उच्च वृद्धिलाई करेक्सन गर्दै बजार २५ अंकले घटेको हो । सोमबार बजार बढ्नुलाई कतिपयले तरलता...
काठमाडौं । अँग्रेजी नयाँ बर्षको पहिलो दिन आज सोमबार नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज परिसूचक नेप्से भारी अंकले वृद्धि भएको छ । यसअघि कयौं दिनको दोहोरो अंकको गिरावट चिर्दै ४४.२२ अंकले बढ्दा परिसूचक १४३४.८० मा पुगेको छ । आज बजारमा कारोबार भएका १६३ स्क्रिपहरुमध्ये १२ ओटाले मात्र नोक्सान बेहोर्नुपर्यो । आज कारोबार रकममा भने गिरावट आएको छ ।...
काठमाडौं । बजारमा सूचिकृत ठूला कम्पनीमा हुने व्यवस्थापकीय गतिविभिका कारण कम्पनीको शेयर मूल्यमा असर पर्न गई समग्र शेयर बजारमा नै असर गर्नु नौलो होइन । नेप्सेमा सूचिकृत ठूला कम्पनीहरुको गतिविधिका कारण समग्र बजारको कारोबार र परिसूचकमा असर पर्ने गरेकै छ । तर बजारमा सूचिकृत नै नभएको कम्पनीले बजारमा उथुलपुथुल ल्याउनु भने अचम्मको विषय...
बढ्दो सरकारी खर्च पूरा गर्न अबको सरकारले तुलनात्मक रुपमा कर लोचदार क्षेत्रलाई बढी ध्यान दिनुपर्ने बाध्यता नै रहन्छ । अहिले सरकारले पुँजीबजारलाई ध्यान नदिनुको कारण पनि सम्भावित करको लागि पुँजीबजार उन्नतशील नहुनु हो । काठमाडौं । अहिले पुँजीबजारमा भ्याटको विषय चर्चामा छ । सरकार धितोपत्र दलालहरुले भ्याट तिर्नुपर्ने अडानमा छ भने...
काठमाडौं । मंगलबारको बजार परिसूचक एकै घण्टामा १.१५ विन्दुले तल झर्दा बजार १६.९३ अंकले तल झरेर १४५० को विन्दुमा आइपुगेको छ । नेपाल स्टक एक्सचेञ्जले नयाँ नियमावलीमा ल्याउन लागेको केही व्यवस्थाबारे जानकारी बाहिरिएपछि बजार घटेको हो । एक सातापछि भितोपत्र बोर्डमा पेस हुन लागेको नयाँ नियमावली मस्यौदामा जरिवाना शुल्क हटाइने लगायत...
काठमाडौं । सिद्धार्थ क्यापिटलको पहिलो म्युचुअल फण्ड योजना सिद्धार्थ इन्भेष्टमेन्ट ग्रोथ स्कीम–१ को इकाई कारोबार रोक्का भएको छ । नेपाल स्टक एक्सचेञ्जले कम्पनीको आग्रहअनुसार उसको कारोबार रोक्का गरिदिएको हो । फण्डले २०६९ मा जारी गरेको उक्त योजना परिपक्व भएपछि कारोबार रोक्का गरेको हो । ५ बर्षको उक्त योजना परिपक्व भएसँगै त्यसका...
शेयर बजारमा लगानी गर्न एनआरएनको प्रस्ताव, कार्कीले दिए नेप्सेलाई हरियो बनाउने यस्तो संकेत
काठमाडौं । नेपाली शेयर बजारमा गैरआवासीय नेपालीहरुलाई पनि प्रवेश गराउनु पर्ने माग उठिरहेको अवस्थामा गैरआवासीय नेपालीहरुको टोली आफँै लगानी प्रस्ताव लिएर नेपाल धितोपत्र बोर्डमा पुगेका छन् । एनआएन अध्यक्ष भवन भट्टको नेतृत्वमा गएको टोलीले बोर्डका अध्यक्ष रेवतबहादुर कार्कीलाई भेटी लगानी गर्न सक्ने वातावरण मिलाएको खण्डमा आफूहरु...
माथिल्लो तामाकोसीको शेयर फागुनभित्रै आइसक्ने ! यस्तो छ बाँडफाँडको हिसाबकिताब
काठमाडौं । स्थानीय र सर्वसाधारणलाई गरी एकैपटक २ अर्ब ६४ करोड बढीको शेयर वितरण गर्न लागेको माथिल्लो तामाकोशीको शेयर आगामी फागुन महिनाभित्र आइसक्ने सम्भावना रहेको छ । हाल नेपाल धितोपत्र बोर्डको पाइपलाइनमा रहेको सो शेयर निष्काशन प्रक्रिया अबको २ महिनाभित्र टुङ्ग्याइने कम्पनीले जनाएको हो । माथिल्लो तामाकाशीको विद्युत् उत्पादन...
प्रिमियर इन्स्योरेन्सको एफपीओको बहार ! कति मालामाल, कि रित्तो हात ?
गत १ वर्षको नेप्से आँकडा हेर्ने हो भने प्रिमियर इन्स्योरेन्स ९६० रुपैयाँसम्ममा कारोबार भएको देखिन्छ भने बुटवल पावर कम्पनीको शेयर ४७८ रुपैयाँसम्ममा कारोबार भएको देखिन्छ । काठमाडौं । केही दिनअघि नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट निष्काशन अनुमति प्राप्त गरेको प्रिमियर इन्स्योरेन्सले आज विवरणपत्र प्रकाशन गरी एफपीओ निष्काशनको मिति तय गरेको छ । सो...
२० महिनापछि प्रभु बैंकलाई हकप्रद निष्कासन स्वीकृति, २३५ करोडको हकप्रद आउन किन भयो ढिलाई ?
काठमाडौं । हकप्रद शेयर निष्कासनका लागि अनुमति माग्दै धितोपत्र बोर्डमा आवेदन दिएको २० महिनापछि प्रभु बैंक लिमिटेडले १०ः४ अनुपातका २ अर्ब ३५ करोड २५ लाख रुपैंया बराबरको हकप्रद शेयर निष्कासनको स्वीकृति पाएको छ । बैंकले २०७३ बैशाख ८ गते दिएको निवेदनलाई बोर्डले बिहीबार स्वीकृति दिएको हो । उक्त हकप्रदसँगै हाल ५ अर्ब ८८ करोड रुपैंया चुक्ता...
शेयरबजारमा प्रवेश गर्दै सिमेन्ट क्षेत्र, पहिलोपटक शिवम् सिमेन्टले ३७ करोड आईपीओ जारी गर्ने
काठमाडौं । वास्तविक क्षेत्रलाई शेयर बजारको पहुँचमा ल्याउने सरकारी प्रयासहरु अपेक्षाअनुरुप सार्थक नभइरहेको अवस्थामा आत्मनिर्भरोन्मुख र प्रतिस्पर्धी क्षेत्र मानिएको सिमेन्ट उद्योगले पहिलोपटक पुँजी बजार प्रवेशको तयारी गरेको छ । त्यसका लागि शिवम सिमेन्टले पहिलो कदम उठाएको हो । शिवम् सिमेन्टले पहिलोपटक सर्वसाधारणलाई १० प्रतिशत शेयर...